ပို့စ်တိုင်းကိုဒီ element ၂ ခုကိုထည့်ပါ Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, ဇန်နဝါရီလ 2, 2014 ကြာသပတေးနေ့, ဇန်နဝါရီလ 2, 2014 Douglas Karr
ငါအဲဒီမှာငါဘာလုပ်ခဲ့သလဲ စုစုပေါင်း cheesy, Off-the- ဇယား မင်္ဂလာပါ... ဒါကြောင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါဘလော့ဂ်ပို့စ်ခေါင်းစဉ်ကိုတိကျတဲ့နည်းနဲ့ရေးခဲ့လို့ပါ။ ၎င်းသည် Upworthy နှင့် Buzzfeed တို့ကဲ့သို့သောဆိုဒ်များတွင်သော့ချက်ကျသောနည်းဗျူဟာဖြစ်ပြီးစာဖတ်သူသန်းပေါင်းများစွာကိုသူတို့၏စာမူခေါင်းစဉ်များကိုအဓိကဒြပ်စင် ၂ ခုဖြင့်သိချင်စိတ်နှင့်စိတ်ခံစားမှုကိုချိန်ညှိခြင်းအားဖြင့်ဆွဲယူခဲ့သည်။
သိချင်စိတ် - အချက်နှစ်ချက်ကိုပြောခြင်းအားဖြင့်သင်၏စိတ်သည်စတင်တွေးတောလာပြီးနှိပ်မိရန်သွေးဆောင်ခံရသည်။
စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း - ငါဝေါဟာရကိုဂရုတစိုက်အသုံးပြုခဲ့သည် ကျော်ကြားမှု ပို့စ်ခေါင်းစဉ်၌တည်၏။ သူတို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုလူကြိုက်များအောင်ဘယ်သူတွေမလုပ်ချင်ကြတာလဲ။
ဒီနှစ်ခုဒြပ်စင် post ကိုခေါင်းစဉ် ရယ်စရာကောင်းလောက်အောင်အောင်မြင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုအထူးဂရုစိုက်ရမယ်။ ငါဖော်ပြခဲ့တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကိုငြီးငွေ့နေပြီ။ သူတို့မှာမတွန်းလှန်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိနေပေမဲ့သူတို့ကိုငါတန်ဖိုးမထားဘူး၊ ကြောင်တွေရဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုခြင်း၊ မှတ်ချက်။ ။ လာမယ့် ၄၅ မိနစ်မှာမင်းရဲ့အာရုံလွဲသွားမှာကိုကြောက်ရွံ့သောကြောင့်ထိုဆိုဒ်များကိုငါမချိတ်ဆက်ခဲ့ဘူး။
ဒါကနည်းဗျူဟာကိုရှောင်သင့်တယ်လို့ဆိုလိုတာလား။ ဟင့်အင်း ... ဒါပေမယ့်ငါမင်းကမင်းခေါင်းစဉ်ကိုကျော်ဖြတ်ပြီးမင်းပြောတာတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့မလိုအပ်ဘူးလို့ငါထင်တယ်။ ဒီနည်းဗျူဟာကိုအသုံးချတဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာအတော်များများဟာခေါင်းစဉ်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုတာငါရှာတွေ့တယ်။ အနည်းငယ်ထစ်ချပြီး၎င်းကိုစိတ်ကူးကောင်းသည့်နည်းဗျူဟာတစ်ခုကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ဒီတော့…မင်းကမင်းကဓာတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်ဆိုတော့မင်းဓာတ်ပုံ ၈ ချက်အကြောင်းပို့မယ်။ စံ ol အစား 8 သိကောင်းစရာများ ဘလော့ဂ်ပို့စ်တင်၊ သင်၏နောက်ပုံတစ်ပုံကိုမရိုက်ကူးမီဤရိုးရှင်းသောအဆင့် (၈) ဆင့်ကိုလုပ်ဆောင်ပါ။ ရလဒ်များကိုသင်အံ့အားသင့်လိမ့်မည်။ သိချင်စိတ် (အဘယ်အရာကိုခြေလှမ်းများ?) နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု (အံ့သြ!) ။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်, ဒါကြောင့်ဓာတ်ပုံရိုက်ယူသကဲ့သို့အထင်ကရတစ်ခုခုမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတစ်ခါလည်းမင်းရဲ့တာယာတွေကိုစစ်ဆေးနေတာဖြစ်နိုင်တယ်။ သငျသညျအကြံပေးချက်များအကြောင်းကိုရေးသားဖို့သွားခဲ့ကြသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထံမှ စက်ပြင်။ အစား… လုံခြုံမှုကိုထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲတာယာဘဝတိုးချဲ့ခြင်း၏ကျွမ်းကျင်သောလျှို့ဝှက်ချက်များ။ ပို့စ်သည်လေဖိအားကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်သင်၏တာယာများကိုလှည့်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်နိုင်သေးသည်။ သို့သော်သင်သိလိုစိတ် (လျှို့ဝှက်ချက်များ?) နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု (လုံခြုံမှု!) သို့နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်စကားစမြည်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ငါ့စကားမပြောနဲ့ သင့်ရဲ့နောက်ဘလော့ပို့စ်များကိုဆက်တိုက်ရိုက်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည် click-through နှုန်းကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်ဆိုလျှင်သင်၏ဆောင်းပါးများကိုပိုမိုတွေ့မြင်ရလိမ့်မည်၊ ပိုမိုမျှဝေမည်၊ နောက်ထပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့ ဦး တည်လိမ့်မည်။ ကျော်ကြားမှုအတွက်ပေါက်ကွဲ Go!
Tags: သိချင်စိတ်စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းpost ခေါင်းစဉ်ရေးပါစာအရေးအသား
ဇန်နဝါရီ 2, 2014 မှာ 9: 59 AM
Doug, ငါကဒီမှာရှိကွောငျးအတွက် linkbait "အလုပ်လုပ်ခဲ့" ကြောင်းမှန်သည်။ မင်းရဲ့ post ကိုငါဖတ်တယ် ဒါပေမယ့်ခေါင်းစဉ်ကြောင့်ကျွန်တော်မဖတ်ခဲ့ဘူး၊ စာရေးသူကိုကျွန်တော်သိတယ်၊ မင်းကတိတည်ဖို့မင်းဖြစ်နိုင်မယ်ထင်လို့ငါဖတ်တယ်။
သငျသညျဤနည်းအနည်းငယ်ပိုအသွားအလာလာပြီ, သင်တစ် ဦး မှတ်ချက်၏ပုံစံအတွက်ငါ့ကိုထံမှအချို့သောထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရတဲ့နေပေမယ့်ငါတကယ်ခံစားရတယ် နည်းသော ယခုအချိန်တွင်သင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်အတွက်စေ့စပ်။ ဒီ post ကိုမျှဝေချင်ပါတယ် အဲဒါဟာအရင်ကငါမသိတဲ့အရာတစ်ခုကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့မခံစားရဘူး
သို့သော်သင်၏ရည်မှန်းချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ Upworthy နှင့် Buzzfeed တို့ကဲ့သို့သောဆိုဒ်များသည်သန်းပေါင်းများစွာသောလူများအားအဆင့်မြင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုစိတ်မ ၀ င်စားသောကြောင့်လူအများအားနှိပ်စက်ရန်ကြိုးစားနေသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ၄ င်းတို့သည်သူတို့၏ကြော်ငြာများနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဆိုင်ရာအသိပညာများအပေါ်စွဲမှတ်မှုများကိုရှာဖွေနေသည်။ သူတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်လေးလေးနက်နက်တင်ပြမှုကိုလေးစားသောလူများမဟုတ်ပါ။
မင်းရဲ့အကြံဥာဏ်ကမှန်ပါသလား။ ဒါဟာစျေးကွက်၏ပန်းတိုင်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သင်၏တာယာများကိုလှည့်ခြင်း၏“ လျှို့ဝှက်ချက်” ကိုသဘောကျနှစ်သက်သူများသို့မဟုတ်စိုးမိုးရေးသုံးပုံတစ်ပုံကိုအသုံးပြုရန်အကြံပေးချက်ကို“ အံ့အားသင့်” သူများကိုသင်လိုချင်ပါကဤပုံသေနည်းသည်ကျိုးနပ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်ဒီသုံးစွဲသူကိုငါသိတယ်၊ ငါ linkbait ကိုမနှိပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ ငါကိုယ်တိုင်မင်းကိုသိလို့ပါ။ ဒီခေါင်းစဉ်နှင့်အတူမည်သူမဆိုလျစ်လျူရှုခဲ့ကြပေသည်။
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် @bbyslaughter: disqus - ငါသဘောတူတယ်ဆိုတာမင်းတွေ့လိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ငါ့ဘလော့ဂ်မှာဒီမဟာဗျူဟာကိုအသုံးမပြုခဲ့ဘူး၊ အဲဒါကတခြားဘလော့ဂ်တွေမှာငါ့ကိုပိတ်ထားလိုက်တယ်။ ငါပိုကောင်းတဲ့ post ခေါင်းစဉ်ရေးသားချင်, ရှေးရှေးငါးစာအားဖြင့်ရေကြောင်းသွားမပါဘဲ။ ဒီတိကျတဲ့နည်းဗျူဟာကထိပ်ဆုံးမှာရှိနေပေမယ့်သိချင်စိတ်ကိုအသုံးချပြီးစိတ်လှုပ်ရှားမှုထဲကိုထိလိုက်တာကအဓိကကျတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အလွန်ကြီးစွာသောစကားပြောဆိုမှုကိုစတင်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။